Fanelanelanan’ny Ffkm: Mangataka Fitonina | mandimby maharo
Fanelanelanan’ny Ffkm: Mangataka Fitonina
Posted on 12 July 2013 by Mandimby Maharo
Manana andraikitra lehibe hipetrahan’ny fitoniana eto amin’ny Firenena ianareo Mpanao Gazety, mba hanamora ny Dinikasa ho fampihavanana, koa mbola miangavy anareo izahay tsy hamoaka hafa tsy izay vaovao marina sy voamarina.
Andalana faha-valo tamin’ny fanambarana nataon’ny Ffkm ny 11 jolay io. Fanambarana izay nitondran’ireto raiamandrenim-piangonana ireto ny fizotran’ny fanelanelanana ataony amin’izao fotoana izao. Mivaky toy izao io fanambarana io:
Rariny tokoa ny fangatahan’ny Ffkm ny mba hampisina ny fitonina. Hita sy re ary fantatra ihany manko fa mitady hahazo vahana ny fandranintana mandritra ireny fandaharana amin’ny fahitalavitra sy haino aman-jery ireny. Maro ireo miantsy valifaty ho an’ny Filoha teo aloha noho ny raharaha 07 febroary. Maro koa ny mitady hevitra ny hanenjehana ny Fat noho ny fahaverezan’asa sy ny fitontonganan’ny farimpiainany nandritra ity tetezamita ity. Ankoatr’izay ireo manenjika sy manaratsy ireto mpanelanelana ireto.
Iarahan’ny rehetra manaiky koa nefa fa ny fitadiavam-bahaolana eo amin’ny samy malagasy ihany no hany sisa lalana ahatafavoahana ny firenena amin’izay lavaka misy azy izao. Efa tsy nahitam-bokany rahateo koa ny fidiran’ireo vahiny tamin’izany fanelanelanana izany. Ny fanelanelanana nefa dia tsy hahomby raha tsy manatrika eo avokoa ny andaniny sy ny ankilany. Noho izany dia ilaina ny fahatongavan’ny filoha teo aloha eto Madagasikara. Io mety ho fahatongavan’andriamatoa Ravalomanana io indrindra nefa no tena fototry ny tsy fitonina, na ny marimarina kokoa atao anton’ny tsy hampitonina.
Mahalaza be ny fanambarana nataon’ny Ffkm io ka anjaran’ny tsirairay no maka ny andraikiny.Isan’izany ny asa fanaovan-gazety. Tsy ny mpanao gazety irery nefa fa izay rehetra sehatra mpampita vaovao toy itony bolongany itony, na ireny tamba-jotra saosialy ireny. Ary amin’ny maha isan’ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fanabeazana ny serasera dia anjaran’ny mpanabe rehetra ny mitarika ho amin’izany fampitonina izany.
Tags: FFKM, politiqueCategories: Actralité, politique